भांग कम्पनी दिवालिया | भांग अटर्नी | टम होवार्ड
क्यालिफोर्नियाले मेडिकल मारिजुआनाको प्रयोग र बिक्रीलाई अनुमति दिएको २० बर्ष भन्दा बढी भएको छ। २० बर्षको अवधिमा 20० वटा राज्यहरू ब्यान्डवागनमा छिराइएका छन् र चिकित्सा गाँजाको प्रयोग सामान्यतया स्वीकार्य भएको छ।
बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्न देशका विभिन्न भागहरूमा थप गाँजा व्यवसायहरू लागू गरिएको छ। नतिजाको रूपमा, गत केही बर्षहरूमा भाँडो व्यवसाय जबरजस्ती बढेको छ र स्टक सहित सम्बन्धित उत्पादनहरूले विश्वभरका लगानीकर्ताहरूको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
जहाँ मारिजुआना उद्योग एकदम आकर्षक छ, केही व्यवसाय विगतमा विभिन्न कारणका लागि असफल भएको छ। तर के हुन्छ जब मारिजुआना व्यवसायहरू सफल हुँदैनन्? के तिनीहरूसँग अरू ब्यापारहरू जस्तै बैंकरपको लागि फाइल गर्ने विकल्प छ?
तल हामी भांग दिवालियापनमा हेर्नुहोस्, साथै साथै लगानीकर्ताहरूका लागि विकल्पहरू उपलब्ध छन् जसको व्यवसाय विफल हुन वा सफल हुन असफल हुन्छ।
कारोबारका लागि उपलब्ध थुप्रै विकल्पहरू मध्ये एक विफलता दिवालियापन संरक्षणको लागि फाइलिंग हो। दिवालियापनका लागि फाइल गरेर, यी व्यवसायहरूले debtण हटाउन मात्र सक्षम छन्, तर तिनीहरूलाई कम वित्तीय दबावको साथ पुनर्संरचना गर्न सजिलो हुन्छ। दुर्भाग्यवस, यो विकल्प मारिजुआना उद्योगमा व्यवसायका लागि उपलब्ध छैन।
हाल, मारिजुआना व्यवसायहरू संघीय दिवालियापन सुरक्षाको लागि योग्य हुँदैन। यो राज्यमा पनि लागू हुन्छ जहाँ भाँडो कानूनी छ। सहमति यो छ कि जब सम्म मारिजुआना एक नियन्त्रित पदार्थ रहन्छ, यस उद्योगमा व्यवसायहरू राज्य द्वारा सुरक्षित हुँदैन जब यो दिवालिया हुन्छ।
यो किनभने ब्याruptcy्करप्सीका सबै केसहरु संघीय अदालतमा सुनुवाइन्छ। जे होस्, नियन्त्रित पदार्थ कानून अन्तर्गत, गाँजा अझै पनी एक ड्रग तालिका मानिन्छ, जसको अर्थ यो बढ्न, वितरण गर्न वा निर्धारित गर्न गैरकानूनी हो।
संघीय कानूनले दिवालियापन नियन्त्रण गर्दछ, यूएस बैंकरप्टि ट्रस्टीले कानून वा कानून तोडे बिना गैरकानुनी मानिने सम्पत्तिहरू प्रशासन वा नियन्त्रण गर्न सम्भव छैन।
जबकि यसले मारिजुआना व्यवसायमा लगानीकर्ताहरूलाई नोक्सानमा पार्दछ, सबै आशाहरू हराउँदैनन्। त्यहाँ धेरै अन्य विकल्पहरू उपलब्ध छन् एक गाँजा व्यवसाय को लागी अपेक्षित रूप मा दूर छैन। तिनीहरू समावेश:
यस विकल्पमा ब्यापारिक सम्पत्तिहरू नगदमा रूपान्तरणमा समावेश छ, जुन लेनदारहरूबाट debtsण अफसेट गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तरलता या त स्वैच्छिक वा अनिवार्य हो, र सम्झौताको यी दुवै रूपहरूमा संलग्न चरणहरू फरक छन्।
अनिवार्य तरलताको मामलामा अदालत संलग्न छ। लेनदारहरूले अदालतलाई कम्पनीबाट हटाउन अनुरोध गरे। यो अधिकांशतः तब हुन्छ जब लेनदारहरु विश्वास गर्छन् कि कम्पनीले आफ्नो payingण तिर्न सक्षम छैन।
स्वैच्छिक दिवालीको लागि अदालत संलग्न छैन। यो कम्पनी को निर्देशक हो कि तरलता प्रक्रिया शुरू जब यो स्पष्ट हुन्छ कि कम्पनी आफ्नो payingण तिर्न कठिन हुनेछ। धेरै जसो केसहरूमा कम्पनीले तरलताको पछि सबै debtsणहरू मिलाउन सक्षम हुन्छ।
द्रुतभाव पूरा हुने बित्तिकै कम्पनी विघटन हुन्छ। तरलताको अवधि व्यापारको जटिलतामा निर्भर गर्दछ, अन्य कारकहरू बीच। प्रक्रियाले प्रायः दिवाखोरीमा विशेषज्ञको संलग्नताको लागि आह्वान गर्दछ, जसको मुख्य काम फिडिनेसन प्रक्रियाको विभिन्न चरणहरूमा के गर्नु पर्ने निर्देशनहरू दिनु हो।
भाँडा व्यवसाय मा उनीहरुको लागि उपलब्ध अन्य विकल्प रिसीभरशिप हो। प्राप्ति एक प्रक्रिया हो जसमार्फत लेनदारहरू torणीको सम्पत्तिको मालिक हुन्छन्।
व्यापार बाट एक विश्वसनीय व्यक्ति रिसीभरको रूपमा कार्य गर्न र न्यायिक स्वीकृतिमा गाँजा उत्पाद बेच्न नियुक्त गरिन्छ। यो प्रक्रिया सामान्यतया देबदारहरू र लेनदाराहरू दिवालियापनको सामना गर्नुपर्दा लिने उत्तम कार्यकुशलमा सहमत हुने पछि हुन्छ
जे होस् रसिभरसिप सामान्य छैन, यसले देनदारहरुलाई छिटो आर्थिक ofणबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्दछ। जबकि torsणीहरूले तिनीहरूको सम्पत्ति गुमाए, प्रक्रियाले लेनदेनहरूलाई उनीहरूको वित्तीय पुन: प्राप्ति गर्न सम्भव बनाउँदछ।
यो याद गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि एक प्रापकले nderणदाताको चासो अनुरूप कार्य गर्दछ। यसको मतलब यो होइन कि ब्यापार मालिकले उनीहरूको मार्गनिर्देशन प्रस्ताव गर्न सक्दैन विशेष गरी यस्तो विशेष अवस्थामा भाँडो व्यवसाय चलाउँदै। त्यहाँ व्यवसाय मालिकले सम्पत्तीको मूल्य बढाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ र सबै ndणदाताहरू प्रक्रियाको अन्त्यमा सन्तुष्ट छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
मारिजुआना व्यवसायका लागि जोखिम
यस उद्योगमा व्यवसायहरू संघीय दिवालियापनको लागि फाइल गर्नको लागि योग्य छैन भन्ने तथ्यले ndणदाताहरू उनीहरूलाई creditण बढाउँदा सावधान हुन्छन्। Endingण दिने संस्थाहरूलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ कि यदि व्यवसाय अन्तर्गत जान्छ भने, उनीहरूको पैसा फिर्ता पाउने सम्भावना कम हुन्छ।
वास्तवमा, institutionsण दिने संस्थाहरूबाट loansण प्राप्त गर्न सफल भएका उद्यमीहरूलाई अन्य ब्यापारहरूको तुलनामा प्राय: बढी ब्याज दरहरू लिइन्छन्।
मारिजुआना उद्योगले अन्य जोखिमहरूको पनि सामना गर्दछ जुन लगानीकर्ताहरूलाई अवगत हुनुपर्दछ। मारिजुआनाको बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्ने कानूनहरू क्रमशः विकसित हुँदै जान्छन्, र लगानीकर्ताहरूले यी परिवर्तनहरूको साथ अमूर्त राख्नु पर्छ। यदि कारोबार गर्ने क्रममा कानून भ broken्ग भयो भने, उनीहरूको भांग अनुमतिपत्र हराउनको लागि यो धेरै सजिलो हुन्छ।
त्यस्तै, मारिजुआना व्यवसायका लागि अनुभवी वकिलहरूसँग मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ जसले कानुनी सल्लाह दिन सक्ने र कहाँ आवश्यक छ।
राम्रो समाचार, तथापि, झारको उद्योग फस्टाउँदैछ भन्ने हो, जसको अर्थ केवल उद्योगमा प्रवेश गर्नेहरूले सफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ र अपेक्षाकृत छोटो समयमै उनीहरूको लगानी गुणा गर्दछ।
हामी पियोरिया, इलिनोइसमा आधारित कानून फर्म हौं। मेरो नाम अटर्नी थोमस होवार्ड हो। म भांग उद्योग कानुनी मुद्दाहरूमा विशेषज्ञ छु र मारिजुआना व्यवसायमा लगानीकर्ताहरूलाई कानुनी सल्लाह दिन सक्षम वकिलहरूको टोलीसँग काम गर्दछु।
यदि तपाईंको भांगको व्यवसायले सम्भावित वित्तीय तोडफोडको सामना गरिरहेको छ भने, हामीसँग सम्पर्कमा रहनुहोस्। हामी केवल सल्लाह प्रदान गर्दैनौं तर तपाईका लेनदारहरूसँग कुराकानी पनि गर्नेछौं भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि कि दुबै पक्षहरूले उत्तम कारबाही गर्छन्।
हामीले बुझ्दछौं कि torsणीहरू साह्रै कष्टकर हुन सक्छन्, विशेष गरी यदि तपाईंसँग आफ्नो व्यवसाय बचत गर्न सीमित विकल्पहरू छन् भने। हामीलाई थाहा छ कि जब चीजहरू जटिल लाग्न सक्छन, त्यहाँ सधैं बाहिरको मार्ग हुन्छ। हामीसँग विज्ञहरूको टोली छ जो तपाइँको किताबहरूमा जानेछ र तपाइँलाई सूचित निर्णय लिन मद्दत गर्दछ।
हामी तपाईलाई व्यापार गर्न र मारिजुआना उद्योगमा धेरै चुनौतिहरूको समाधान गर्न यो सजिलो बनाउन समर्पित छ। हाम्रो इलिनोइस आधारित कानुनी फर्मको साथ सम्पर्कमा रहनुहोस्, र हामी तपाईंलाई कसरी आफ्नो torsणीहरूको न्यूनतम दबाबको साथ आर्थिक समस्याबाट मुक्त हुन सक्छ भन्ने बारे अनमोल सल्लाह प्रस्ताव गर्दछौं।